Lufthansa Pack olana
fanontaniana Lufthansa Pack olana
1 taona 5 volana lasa izay #731 by bgf
Namboariko ny kitapo Lufthansa tamin'ity lafiny ity ary manana olana amin'ny Airbus A380 aho.
Rehefa misotro ilay bokotra eo am-baravarankely aho dia tsy miasa ny FIFIDY, COM, ADF etc. Midika izany fa tsy afaka mametraka ireo fepetra ireo aho.
Raha tsy izany dia tsara ity fiaramanidina ity ary te hampiasa izany matetika aho.
Angamba misy olona afaka manampy ahy?
Fotoana mamorona pejy: 0.091 segondra